Faahfaahinta kulamadii Group A (Wararkii ugu dambeeyey EURO 2012)+SAWIRO – SBC
Faahfaahinta kulamadii Group A (Wararkii ugu dambeeyey EURO 2012)+SAWIRO
Posted by editor on June 13, 2012 Comments
Ciyaaryahanada Petr Jiracek & Vaclav Pilar ayaa laba gool oo caaqibo leh u dhaliyey xulka Czech Republic oo kulankoodii ugu horeeyey guuldaro kala kulmay Ruushka, waxaana maanta ay cidiyo ku dirir kaga guuleysteen xulka Gariiga oo kulankoodii koowaad barbardhac la galey xulka Poland oo ka mid ah wadamada martigalinaya EURO 2012 .
Xulka Gariiga waxaa rajadii soo gashay ciyaaryahan daqiiqadii 53-aad uu dhaliyey gool ku yimid qalad kubada ay uga baxsatey goolhayaha kooxda Chelsea ee u dhashay wadanka Czech, Petr Cech.
Goolasha Czech ay dhaliyeen waxay ahaayeen kuwa boobsiis ah oo daqiiqadihii 3-aad iyo lixaad ay ku hubsadeen shabaqa Gariiga arintaasi oo walwal iyo walaac galisay taageeraya Gariiga oo 2004-tii ku guuleystey koobkan loo tartamayo.
Goolka ciyaaryahan Jiracek oo ka tirsan kooxda Wolfsburg ee reer Jarmal uu dhaliyey wuxuu ahaa kii afaraad ugu dhaqsiyaha badan ee lagu dhaliyo taariikhda koobka European Championship, isagoo dhaliyey ciyaarta oo socotey 134 ilbiriqsi.
Ciyaartan oo ka dhacdey garoonka Stadion Miejski ee magaalada Wroclaw waxaa soo xaadiray 35200 oo taageerayaal ah.
Czech waxaa sugaya kulan dhimasho ama nolal ah oo ay la yeelanayaan sabtida soo socota xulka Poland oo barbardhac ka ciriirsadey Ruushka, iyadoo Ruushkuna Gariiga isla maalintaasi fooda dari doono.
Poland barbardhac raali galiyey la gashay Ruushka
Ciyaaryahan Jakub Blaszczykowski oo ah captainka Poland khadka dhexena uga ciyaara kooxda Borussia Dortmund ee Jarmalka ka dhisan ayaa wax kama jiraan ka soo qaaday rajadii Ruushku ka qabeen inay si toos ah ugu gudbaan wareega 8-da ee koobkan.
lan Dzagoev oo horey u haystey horyaalka gool dhalinta koobkan ayaa sadex ka dhigay labadiisii gool isagoo Ruushka siiyey hogaanka ciyaarta 37-aad, iyadoo goolkaasi uu dibnaha isku qabadsiiyey taageerayaasha reer Poland oo kumaan kun oo ahaa kooxdooda garabka ka taagnaa, kuwaasi oo maanta isku dhac la galay taageeraayaasha Ruushka.
Goolhayaha Ruushka Malafeev & difaacyda ka aagan waxay jilibka u aaseen weeraro iyo kubado laad ah oo uga imaanayey ciyaarayahanada Polish-ka oo kulankaasi ay u aheyd in ay ka baxaan koobka ama inay natiijo haba yaraatee barbardhac ah ka helaan xulka Ruushka oo koobkan miisan culus ku leh.
Laakiin daqiiqadii 57 oo aheyd 20 daqiiqo ka dib goolkii Ruushka, ciyaaryahan Blaszczykowski wuxuu shabaqa Ruushka masaafo 25 yards ah isagoo kubad xoogan geeska ka dhigay gool ilaaliye Malafeev waxaana natiijada ciyaarta uu ka dhigay 1-1, waxaana hal mar is qabsadey sawaxanka iyo dayaanka taageerayaasha reer Poland oo kulankan si weyn isagu soo diyaariyey.
Isabadalo badan oo ay sameeyeen labada tababare iyo weerar iyo weerar celis dhinac kasta iyo xeelad la adeegsadey in labadaasi gool ee kooxiba dhalisay mid kale ku darto waa ay noqon wayday, waxaana natiijada kulanka uu ku soo dhamaaday 1-1.
Ruushka kulanka uu la yeelanayo Gariiga wuxuu u baahan yahay barbardhac, hadii uu badis helana waa ka sii fiican, laakiin in laga badiyaa waxay isbadal ku keeni kartaa hogaanka afarta dhibcood ee uu group-kan ku hogaaminayo.
Poland waxay u baahan tahay kulanka Czech ay la yeelanayso inay badiso, hadii laga badiyo fagaaraha ciyaarta way is wayn doonaan, laakiin hadii ay barbardhac hesho waxay tagayaa sadex dhibcood, halka Czech ay tagayso 4 dhibcood sidaasi ayayna uga faaruqaysaa garoomada oo ciyaartoyda reer Poland waxay ka mid noqonayaan muwaadiniintooda garoomada xaga sare ciyaaraha ka daawanaya.
Ruushku wuxuu kaga jiraa kaalinta 13-aad kala horeynta wadamada ugu horeeya liiska FIFA ee wadamada ugu fiican kubada cagta, halka dalka Poland liiskaasi wuxuu kaga jiraa 62.